Algérie Télécom: Ny Hany Azo Raisina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2017 11:47 GMT
“Raha misy olona tsy afaka ny hitsahatra tsy hitaraina momba ny Algérie Télécom, dia izaho izay, araka izany dia fotoana izao hizaràko aminareo ireo fitarainako,” hoy ilay Alzeriana bilaogera, 19 taona, Houda nanokatra ny lahatsorany “Algérie Telecom, ilay safidy tsara”.
Malaza eny anivon'ireo bilaogera ny AT noho ny haratsian'ny tolotra omeny[FR]. Ny fahatapahana miverimberina amin'ny tolotra no lohahevitry ny fitarainana maro nandritry ny taona maro, niteraka fitarainana teny amin'ireo mpitoraka bilaogy ary hatramin'ireo andianà lahatsary YouTube fanehoana hatezerana amin'ny tolotra omen'ny AT [FR].
Araka ny ambaran'ny olona iray mpaneho hevitra, ButterflyOfFire, izay milaza amin'ny antsipirihany ny hatezerany amin'ny AT ary manana fantsona [FR] YouTube iray manasongadina ireo lahatsary fanehoankevitra momba ny teknolojia ao Alzeria :